पूर्वाधार क्षेत्रमा बिमा कम्पनीको लगानी किन कमजोर ? «
पूर्वाधार क्षेत्रमा बिमा कम्पनीको लगानी किन कमजोर ?
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १७, २०७७ सोमबार
बिमा समितिले २०७५ चैतमा ‘बिमकको लगानी निर्देशिका–२०७५’ जारी गर्दै बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न आठ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था ग¥यो । बिमा कम्पनीहरूलाई लगानीको क्षेत्र, दायरा विस्तार गर्दै क्षेत्रअनुसार सीमासमेत निर्धारण गरिएको छ । निर्देशिकाले बिमा कम्पनीमा रहेको पुँजी पूर्वाधार विकासमा समेत खर्च गर्न सकिने बाटो खुला गरे पनि कम्पनीहरूले यसतर्फ चासो लिएका छैनन् । १९ जीवन बिमा कम्पनीहरूले ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकोमा दुई कम्पनीले २ अर्ब मात्र पूर्वाधारमा गरेका छन् । यसैगरी २० निर्जीवन कम्पनीहरूले कुल ६० अर्ब ४६ करोड लगानी गरेकोमा ५ कम्पनीको १३ करोड ४४ लाखमात्र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी छ । रियल सेक्टरमा बढी जोखिम हुने भएकाले कम्पनीहरूको लगानी बैंकको मुद्दती खाता र सेयर बजारमा केन्द्रित छ । निर्देशिकाअनुसार कम्पनीहरूले लगानी गर्न चासो नदिएको भन्दै समितिले क्षेत्र नै तोकेर पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन समेत जारी गरेको छ । निर्देशिका परिवर्तन भएको दुई वर्षसम्म पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा किन लगानी बढ्न सकेन ? के छन् यसका व्यावहारिक समस्या ? यिनै विषयमा केन्द्रित रही कारोबारले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :
निर्देशिकाअनुसार लगानी नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्छौं
कार्यकारी निर्देशक, बिमा समिति
बिमा समितिले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका– २०७५ जारी गर्दै बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न आठ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । बिमकहरूको मागअनुसार नै कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेका थियौं । अहिलेसम्म कम्पनीहरूले निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानी विविधीकरण गरेका छैनन् । अधिकांश लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप, ऋणपत्र र सेयर बजारमा मात्र केन्द्रित रहेको पाइन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी एकदमै न्यून छ ।
निर्देशिकामा सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्रमा कम्पनीको कुल टेक्निकल रिजर्भको ५ प्रतिशतसम्म, पूर्वाधार बैंकको मुद्दतीमा ४० प्रतिशतसम्म, घरजग्गा व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयरमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसैगरी कम्पनीहरूले अग्राधिकार सेयरमा २० प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायतका पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५ प्रतिशतसम्म, विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा २० प्रतिशतसम्म र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा कुल टेक्निकल रिजर्भको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने गरी निर्देशिका संशोधन गरिएको हो ।
बिमा कम्पनीहरूमा संकलन भएको पुँजी राष्ट्रको विकास–निर्माणमा पनि उपयोग होस् भन्ने उद्देश्यसहित पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरेका थियौं । कम्पनीहरूले आफूसँग भएको पुँजी पूर्वाधार विकासमा प्रयोग भएपछि देश विकासमा बिमा क्षेत्रको योगदान पनि बढ्छ । यसमा कम्पनीहरूले ऋणका रूपमा नभई इक्विटी सेयरका रूपमा लगानी गर्न सक्छन् । यदि ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने हो भने पनि कम्पनीहरू मिलेर काम गर्न सक्छन् । यदि एउटै कम्पनीले ठूलो आयोजनामा लगानी गर्न सक्दैन भने कम्पनीहरू मिलेर काम गर्न सक्छन् । तर अहिलेसम्म कम्पनीहरूले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेका छैनन् । उनीहरू सहज क्षेत्रहरू मुद्दती निक्षेप, ऋणपत्र र सेयरमा मात्र केन्द्रित भएको पाइएको छ । समितिले कम्पनीहरूलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न आन्तरिक रूपमा निर्देशन दिएको छ । नियमअनुसार लगानी नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्छौं ।
निर्देशिकामा लगानी मोडालिटी स्पष्ट पार्नुपर्छ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एभरेस्ट इन्स्योरेन्स
बिमक लगानी निर्देशिका–२०७५ ले विभिन्न क्षेत्रमा कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने भनेर क्षेत्रगत सीमा तोकेको छ । निर्देशिकामा बिमकहरूले कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायतका पूर्वाधारमा टेक्निकल रिजर्भको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा कृषि, पूर्वाधार पर्यटनमा कसरी लगानी गर्ने हो स्पष्ट छैन । इक्विटीका रूपमा वा ऋण लगानीका रूपमा गर्ने स्पष्ट छैन । ऋणका रूपमा लगानी गर्नका लागि बिमा कम्पनीहरूलाई अनुमति छैन । सहवित्तीयकरणमा ऋण दिनका लागि पनि आफ्नो विनियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्छ । ऋण लगानीका लागि बिमाकै ऐन–कानुनमा पनि समस्या छ । इक्विटी सेयर होल्डरका रूपमा लगानी गर्नका लागि कुन प्रकृतिको उद्योगमा लगानी गर्ने ? प्रालि, पब्लिक लिमिडेट हो कि सेयर मार्केटमा सूचीकृत भएका कम्पनीमा लगानी गर्ने ? बिमा कम्पनीमा प्रवद्र्धकले प्रवद्र्धन गरेका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न पाइने हो या होइन ? यी विषयहरू स्पष्ट छैन । त्योभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्नका लागि जोखिम पनि उत्तिकै छ । रियल सेक्टरको लगानीमा एकदमै धेरै जोखिम छ । लगानीको वातावरण पनि छैन ।
बिमा कम्पनीहरूलाई धेरै क्षेत्रमा काम गर्नका लागि समितिबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीमा गाडी किन्दा होस् या विदेश भ्रमणमा गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको तिमीहरू खर्चको निर्णय गर्नका लागि सक्षम छैनौं, सोधेर गर भनेको हो । त्यसैले हामीसँग भएको फन्ड लगानी गर्दा पनि लगानीकर्ताको रकम जोखिम पर्ने गरी लगानी गर्नु हँुदैन । कम्पनीहरूसँग कृषि, पर्यटन हाइड्रोपावर, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसका जोखिमहरूलाई मूल्यांकन गर्न सक्ने आन्तरिक क्षमता पनि छैन । त्यो लगानीका लागि परियोजना छनोट तथा विश्लेषण गर्ने जनशक्ति पनि छैन ।
समितिले प्रस्टसँग कम्पनीहरूले लगानी गर्ने क्षेत्रहरू यी–यी हुन्, लगानीको तरिका यो हो र यो उपकरणमा यसरी लगानी गर भनेर स्पष्ट पार्ने हो भने लगानी गर्न कुनै समस्या हुँदैन । कम्पनी कोष लगानी गर्दा जोखिममा प-यो भने हामी उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसैले जोखिम मोलेर लगानी नगरेका हौं । समितिले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्पष्ट मोडालिटी बनाएर निर्देशन दिने हो भने यसमा प्रगति हुन सक्छ ।
बिमकको मागअनुसार नै लगानी निर्देशिका संशोधन गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था राख्दा समस्याहरू उठाएनन्, अहिले किन गरेनौं भने सोधेपछि समस्या देखाउने भन्ने सवाल आउन सक्छ । यो विषय लङ टर्म भिजन र प्लान बनाएर अगाडि जाने कुरा हो । यसमा बिमा कम्पनीहरूबाट पनि कमी–कमजोरी भएको हो । आफूलाई मन परेको विषय भए १० औं पटक चिठी लेखेर नियामकलाई हैरान पारेर भए पनि यो विषय कार्यान्वयन गथ्र्यौं होला । अब लगानी निर्देशिकामा केही प्रस्ट्याउन जरुरी छ । पैसा लगानी होस् तर कुनै पनि हिसाबले अव्यावसायिकता नआओस्, आफूलाई मन परेको प्रोजेक्टमा जथाभावी लगानी गर्ने अवस्था नहोस् भन्ने विषयमा चनाखो हुनुपर्छ ।
लगानी गर्ने क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा भोलि कम्पनीका प्रवद्र्धकबाटै यहाँ लगानी गर भनेर दबाब आउन पनि सक्छ । यसले बिमाकोषको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
इक्विटी सेयरमा लगानी जोखिमपूर्ण नै हुन्छ । त्यसको तुलनामा बन्डमा लगानी सुरक्षित मानिन्छ । सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकासका लागि बन्ड जारी गर्ने र त्यसको निश्चित प्रतिशत बिमा कम्पनीहरूलाई छुट्याउने हो भने प्रभावकारी हुन्छ । बिमा कम्पनीहरूसँग रहेको पुँजीलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने च्यानल सरोकारवालाले बनाउनुपर्छ । बिमा कम्पनीहरूसँग आफैं परियोजना छनोट गर्ने, त्यसको जोखिम विश्लेषण गर्ने र कुन ठीक कुन बेठीक भन्ने क्षमता छैन ।
इक्विटी सेयरमा लगानी जोखिमपूर्ण हुन्छ
डा. रवीन्द्र घिमिरे
बिमकहरूकै मागअनुसार दुई वर्षअघि लगानी निर्देशिका परिवर्तन गरिएको थियो । बिमकहरूले हामीले चाहेको क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न पाएनौं, हाम्रो कोषको रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा थन्कियो भनेपछि समितिले निर्देशिका परिवर्तन गरी विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकामा विभिन्न आठ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै त्यसको सीमासमेत तोकिएको छ ।
निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारमा बिमकले टेक्निकल रिजर्भको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा एकदमै न्यून लगानी छ । निर्देशिका परिवर्तन भए पनि बिमकहरूले लगानीमा जोखिम लिन चाहेनन् । त्यसैले कम जोखिम भएको मुद्दती निक्षेपजस्ता उपकरणमै कम्पनीको कोषको रकम थन्किएको हो ।
बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुँजीलाई धेरै जोखिम लिएर लगानी गर्न हँुदैन, जोखिम कम भएको क्षेत्रमा नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो । त्यसैले उनीहरूले इक्विटी सेयरमा नभई बन्डमा लगानी गर्नुपर्छ । बन्डमा लगानी सुरक्षित पनि हुन्छ । कुनै बेला कम्पनीहरूले मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाए । अहिले त्यो प्रतिफल ६.५ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । लामो अवधिको बन्डमा लगानी भएको भए उनीहरूलाई कोषको प्रतिफल छिट्टै घट्ने जोखिम हुँदैन । तर, सीधै इक्विटी सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । अहिले अधिकांश हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य घटेको छ । भोलि हाइड्रोपावर बन्द भयो भने बिमितहरूको पैसा पनि त डुब्छ ।
त्यसैले बिमा कम्पनीहरूले इक्विटी सेयरमा भन्दा बन्डमा लगानी गर्नु सुरक्षित हुन्छ । भारतमै पनि लाइफ इस्योरेन्स कम्पनीहरूले हाउजिङ बन्ड, रोड बन्ड, रेलवे बन्डजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । हाउजिङ कम्पनीमा इक्विटी लगानी गर्ने नभई हाउजिङ बन्डमा लगानी गर्ने हो । बन्डलाई सरकार वा ऋण लगानी गर्ने बैंकले ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । तामाकोसीमा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ, भोलि तामाकोसी आयोजना डुब्यो भने बिमितको १ अर्ब रुपैयाँ त डुब्यो नि । यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले गर्ने ? त्यसैले लगानी गर्दा जोखिमको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ ।
पहिलो बिमा कम्पनीहरूले पूर्वाधारमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था थियो । यसलाई एकैपटक २० प्रतिशत किन बनाइयो, आश्चर्यजनक छ । यसअघि मैले लगानी अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा इक्युटी सेयरमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने कम्पनीले २ प्रतिशत लगानी गरेको अवस्था थियो । त्यहाँ ३ प्रतिशत ग्याप थियो । त्यही पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा २० प्रतिशत बनाइयो ।
बिमा समितिले कम्पनीहरू मिलेर सहायक कम्पनी खोलेर लगानी गर्न सकिने भनेको छ । तर, १० प्रतिशतभन्दा बढी एकै ठाउँमा लगानी गर्न हुँदैन । नेपालमा लगानीको वातावरण एकदमै कमजोर छ । लगानीकर्ताप्रति विश्वास गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । एउटै व्यावसायिक घरानाले दुई–तीनवटा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा लगानी गरेको पनि भेटेका छौं । किन दुई–तीनवटामा गर्नुप¥यो ? एउटैमा लगानी गरेर त्यसलाई राम्रो बनाउने हो नि ! सेयरको भाउ बढाउने, पैसा कमाउने, भोलि बेच्ने, हिँड्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि देखिएका छन् । त्यसैले इक्विटीमा लगानी गर्नु राम्रो हँुदैन ।
निर्देशिकामा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकासमा लगानीको क्षेत्र तोकिएको छ । कृषिमा लगानी गर्ने हो, ठूला–ठूला पब्लिक कृषि फार्म खोल्ने र त्यसलाई पुँजी जुटाउनका लागि बन्ड जारी गर्ने हो भने बिमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न सक्छन् । पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि यही मोडलमा लगानी बढाउन सकिन्छ ।
भारतमा त्यहाँको स्थानीय सरकारले नागरिकका लागि हाउजिङ प्रोजेक्ट बनाउँछ । जस्तै २० अर्ब प्रोजेक्ट बनायो भने त्यसका लागि बैंकबाट ऋण लिन्छन्, बैंकहरूले त्यो प्रोजेक्टका लागि ऋण दिने पुँजी जुटाउनका लागि हाउजिङ बन्ड जारी गर्छन् । यही मोडलमा नेपालमा पनि बिमा कम्पनीहरूमा रहेको पुँजी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसतर्फ अहिलेसम्म कसैले चासो दिएको छैन ।